एडिभिजन लिगः तेस्रो चरणमा कस्को भिडन्त को सँग ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV एडिभिजन लिगः तेस्रो चरणमा कस्को भिडन्त को सँग ? | Sagarmatha TV
एडिभिजन लिगः तेस्रो चरणमा कस्को भिडन्त को सँग ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत बिहीबारदेखि तेस्रो चरणका खेलहरु शुरु भएका छन् । दोस्रो चरणको समाप्तिमा थ्री स्टार र मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब शीर्ष दुई स्थानमा छन् ।
उपाधिको दावेदार मानिएका यी दुवै टोली स्पष्ट तीन अंकको खोजीमा हुनेछन् । लिगको दोस्रो चरण सकिदा थ्री स्टार ६ अंक जोडेर लिगको शीर्ष स्थानमा छ । मनाङ ६ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा छ । दुवैले अघिल्ला दुई खेल जितेका छन् । तेस्रो चरणको खेलमा एक अर्काविरुद्ध मैदान उत्रदा दुवै टोली तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछन् ।
बिहीबारै पहिलो जितको खोजीमा रहेका च्यासल र न्यू रोड टिम (एनआरटी) को भिडन्त हुनेछ । तेस्रो चरणमा दोस्रो ठूलो खेलमा उपाधि आकांक्षी अन्य दुई क्लब पनि खेल्नेछन् । त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीचको खेल भने शुक्रबार हुनेछ । शुक्रबार तीन खेल हुनेछन् । एन्फा कम्प्लेक्समा हुने पहिलो खेलमा ब्रिगेड ब्वाइजले एपीएफको सामना गर्नेछ । दिउँसो २ः३० बजे दुई खेल हुनेछन् । आर्मी र पुलिसको विभागीय डर्बी एन्फा कम्प्लेक्समा चलिरहँदा मछिन्द्र र संकटा एपीएफ रंगशालामा खेल्नेछन् ।
तेस्रो चरणको अन्तिम दुई खेल शनिबार हल्चोकस्थित एपीएफ रंगशालामा हुनेछ । पहिलो खेलमा पहिलो जितको खोजीमा रहेको फ्रेन्ड्सले अर्को अंकविहिन क्लब सरस्वतीको सामना गर्नेछ । दोस्रो खेलमा जावलाखेल र हिमालयन शेर्पाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
खेल तालिका : तेस्रो चरण
मंसिर ६ : च्यासलविरुद्ध एनआरटी ( ११ बजे – एन्फा कम्प्लेक्स)
मंसिर ६ : मनाङविरुद्ध थ्री स्टार (२:३० बजे – एन्फा कम्प्लेक्स)
मंसिर ७ : ब्रिगेड ब्वाइजविरुद्ध एपीएफ (११ बजे – एन्फा कम्प्लेक्स)
मंसिर ७ : आर्मीविरुद्ध पुलिस (२:३० बजे – एन्फा कम्प्लेक्स)
मंसिर ७ : मछिन्द्र विरुद्ध संकटा (२:३० बजे – एपीएफ रंगशाला)
मंसिर ८ : फ्रेन्ड्सविरुद्ध सरस्वती (११ बजे – एपीएफ रंगशाला)
मंसिर ८ : जावलाखेल विरुद्ध हिमालयन शेर्पा (२:३० बजे – एपीएफ रंगशाला)